Lamaane Iswiidhish ah oo laga mamnuucay inay ilmahooda u bixiyaan ‘Vladimir Putin’ | Star FM
Home Wararka Kenya Lamaane Iswiidhish ah oo laga mamnuucay inay ilmahooda u bixiyaan ‘Vladimir...
Lamaane Iswiidhish ah oo laga mamnuucay inay ilmahooda u bixiyaan ‘Vladimir Putin’
Wakaaladda canshuuraha ee Sweden, ee Skatteverket, ayaa diidday codsiga lamaana da’a yar oo doonayay in wiilkooda ay u bixiyaan Vladimir Putin, magaca madaxweynaha caanka ah ee Ruushka.
Idaacadda dadweynaha ee SR ayaa dhawaan soo tebisay kiiska lamaane dagan Laholm, ee dalka Sweden, oo laga mamnuucay inay wiilkooda oo markaas dhashay ay ugu magacaabaan madaxweynaha Ruushka.
Shirkada Skatteverket si sax ah uma sharaxin sababta ay u diideen codsiga magacaabista, laakiin sida uu qabo sharciga Iswiidhan, magacyadu waa inaysan noqon kuwo meel ka dhac ah ama halis u ah inay dhib u keenaan qofka xambaarsan.
Isla markiiba lama caddaynin nooca ama qabta uu ku jiro magaca “Vladimir Putin”, laakiin lammaanaha ayaa lagu qasbay inay baxshaan magic aan muran badan dhalinaynin.
Sida uu dhigayo Lam Naming Law, oo markii ugu horreysay la sameeyay 1982 -kii oo la cusbooneysiiyay 2017, waalidiinta waxaa laga rabaa inay magacyada dhallaanka u soo sheegaan shirkadda Skatteverket saddexda bilood ee ugu horreysa dhalashada kadib.
Si kastaba ha noqotee, dhammaantood ma aha kuwo la oggolaado, oo xilli hore, hay’addu waxay diidday magacyada sida Ford, Pilzner, Q ama Allah, iyagoo wada oggolaaday kuwo aan caadi ahayn sida Google.
Warbaahinta Sweden ayaan weli soo sheegin sababta ay waalidku markii horeba u doonayeen inay ugu magacaabaan wiilkooda madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin.
Previous articleWasiirka Cadaaladda Soomaaliya oo war ka soo saaray shirka COMESA oo uu ka qeyb galay
Next articleDHAGEYSO:Mombasa oo laga xusay maalinta caalamiga ee ka hor taga cudurada ku dhaca wadnaha